VAKY BANTSILANA : Tsy ho masin-teny fa ho mantsin-teny ny mpanao politika | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Tsy ho masin-teny fa ho mantsin-teny ny mpanao politika
Par Freenews sur 28/05/2017
Raha ny hevitry ny “politika” tany an-tendrony dia fanasoavam-bahoaka. Mby aiza izany teny izany ho an’ireo milaza azy ho mpanao politika na eo amin’ny fitondrana na eo anivon’ny fanoherana. Mateza roritina ny fanambaran’ny Eveka raha niantefa tamin’ny olom-boafidy ny hafany : “Notoloran’ny vahoaka fahefana ianareo, nefa zary nampiasainareo hitadiavana ny tombontsoanareo samirery, toy izay nentina hanasoavana vahoaka. Tolotolotra sy ambin-kanina ve no nataonareo odin-tsento ho an’ny vahoaka”. Moa tsy izany ve no iainan’ny vahoaka sy mbola tadiavin’ny mpitondra hotanterahina eto amin’ny tany sy ny firenena. Dia mahasahy mirehareha lozan-tany fa hanompo vahoaka, hono?
Tsy hahamasin-teny azy ireo intsony raha fisehosehoana ivelany sy fanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana ny raharaha. Tsy fanasoavam-bahoaka loatra no imatimatesana fa fiarovan-tseza sao aongana noho ny kobaka am-bava sy volana an-tenda. Atao ahoana, rey olona, fa ala olan’ny sola ny solovolo, fa alaolan’ny mpitondra tsy mahavita zavatra ny tolotolotra tsy mahavita taona. Mba sitrany ahay, ilay henatra vao maraina, mba honerana andro misandratra… Hanao ranolava, hono, ny fanampiana ny mahantra sy ny marefo. Aiza ny fampanantenana ireo sora-panekena 21 hanavotana ireo vahoaka ianjadian’ny kere any Atsimo?
Ny fangodahy leiretsy, mosavin’ny tanimboly; ny ahidratsy mosavin’ny tanimbary, fa ny mpanao politika tsy mahatanteraka ny teny nomeny kosa, mosavin’ny fiainam-pirenena. Tsy hahamasin-teny azy ireo intsony na dia miafinafina amin’ny hoe “voafidim-bahoaka” aza. Sao mieritreritra ny tenany ho fampanantenana aza no nifidianana azy ireo tao? Raha izay no marina, azo antoka fa ho mantsin-teny ny mpanao politika eo anivon’ny fitondrana satria tsy ny “soa iombonana” no andaniana mondron-kery fa fangoronan-karena. Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy hiavaka eny ny vary sy ny tsiparifary. Ka sao matim-bola, rey olona, ka manitsaka antsy maranitra…
Tsy ho vitan’ny ho matsin-teny ihany fa ho mantsim-piaina mihitsy raha tsy misy fandraisana andraikitra amin’ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Ho sanatria, tahaka ny lakolosy ka domina vao hamoaka feo sy hanasoa ny hafa. Iray amin’ireny ny fanajana ny lalàmpanorenana, izay maro no voahitsakitsaka. Anisan’ireny ny andininy faha-10 sy 11, momba ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra sy zo hahazo vaovao; ny andininy faha-41, momba ny fanambaram-pananana, izay mbola misy manao bemarenina; ny fanendrena Praiminisitra andininy faha-54…izay tsy voahaja mihitsy. Aiza ny tena fampiharan-dalàna eo anivon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana? Raha tsy misy vahaolana matotra ireo ampahany voalaza ireo, hitombo an-dalana ny tsimatimanota ary hahamantsim-piaina ny mpanao politika mihitsy izany…